Izinto ezibekiweyo ezingama-200 kwiAlgorithm kaGoogle | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 4, 2013 Douglas Karr
Ewe ayisiyonto ilula kodwa kukudosa kuyo Backlinko kwaye Imbewu eyodwa ngokudibanisa le infographic ejolise ekusasazeni ubume be-algorithm kaGoogle. I-infographic ihamba ngemimandla yommandla, inqanaba lephepha, inqanaba lesiza, izinto zangasemva, unxibelelwano lomsebenzisi, izikhombisi ezongezelelweyo kunye neempawu zentlalo. Kuba abafaki isicelo se- ubunzima kwinto nganye nganye,
Andizukunyula uluhlu ... Andikholelwa lonke uhlobo lwefuthe kodwa ezo zingasenakho ukuphembelela ukusebenza kweinjini yokukhangela ngokwandisa izinga lokucofa. Nokuba yeyiphi na indlela - luluhlu olubanzi oluqinisekileyo lokuba uphonononge kwaye ucinge ngalo njengoko usenza ngcono umxholo wakho.
Juni 4, 2013 ngo-10: 18 PM
Uluhlu olubanzi kakhulu. Izisa ekukhanyeni okuninzi kwesizathu sokuba ii-plugins ze-SEO uninzi lwezi zinto zilapha ngasentla zidityaniswe kuzo. Umzekelo, Umshicileli weSEO. Ndiyabulela ngale nto "konke kwindawo enye".
Isisombululo seDatha yeWebex
Juni 4, 2013 ngo-11: 17 PM
Uluhlu olunomdla kakhulu! Enkosi ngomzamo omangalisayo
Juni 6, 2013 ngo-7: 50 AM
Ubutyebi obukhulu uDoug! Iya kuba yinto endiyibhukumayo! Ngaphantsi kwecandelo lezinto zenqanaba lesiza, umxholo ophindwe kabini unomxholo "ophindwe kabini". Ungafuna ukuyilungisa.
Juni 13, 2013 ngo-7: 17 AM
Enkosi ngale infographic inolwazi.
Inqaku elinye (ngaphandle kwento esele ithunyelwe nguJacquelyn): unokufuna ukutshintsha i-snippet phantsi kwe "Ixesha kwiSiza" ngokunjalo :).
Iindawo zokutyela eMangalore
Sep 6, 2013 kwi-1: 10 AM
Umfanekiso omhle we-infographic. Ukuba kunokwenzeka, igama lakho iwebhusayithi kunye ne-URL usebenzisa igama elingundoqo. Kufuneke u
yisebenzise kwakhona kwisihloko, inkcazo, kunye neemeta tag zewebhusayithi yakho.
Abanye bathi kule mihla uGoogle akajongi ngakumbi kwiimpawu zemeta
Jul 27, 2015 ngo-6: 26 AM
Okt 10, 2015 ngexesha 11:48 AM
Wow ndilifumene nje eli nqaku kuGoogle kwaye ndinombulelo ongazenzisiyo kwiNtengiso yeTekhnoloji yeBhlog ye-infograph enkulu enjalo elula kakhulu ukuyinyamekela.